Yinhle kubabhangqwana abanobhavu wokugeza kanye nesikhungo sokuzivocavoca kokuhamba phambili kwe-Aldea Zama
Quintana Roo, i-Mexico
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-KiiN Rentals
U-KiiN Rentals unokuphawula okungu-522 kwezinye izindawo.
Zitholele leli fulethi elihle e-Tikal complex, endaweni ehamba phambili ye-Aldea Zama, etholakala esitezi sesi-2 ngezitebhisi kuphela futhi lizungezwe zonke izinsiza ezidingekayo ukwenza ukuhlala kwakho kujabulise kakhulu.
Lesi sakhiwo silungele imibhangqwana efuna ukubaleka futhi ikhohlwe inqubo yansuku zonke futhi iphile isipiliyoni esiseduze, sothando nesiphumuzayo.
Ifulethi lethu linendawo yokulala evulekile, lapho ungajabulela khona umbhede ongusayizi wendlovukazi kanye nendlu yokugezela yangasese enobhavu wokugeza esiqinisekayo ukuthi uzowujabulela!
Sikumema ukuthi uhlole izindawo zethu ezivamile ezimangalisayo, uqale ngalokhu: Ichibi langaphandle elingashisi, isikhungo sokufaneleka esifakwe i-bluetooth, i-Game Center ne-Tv kanye ne-bluetooth kanye nokuzipholela kwethu okumangalisayo.
Sicela uqaphele ukuthi asizivumeli izingane, izilwane ezifuywayo futhi okokugcina, i-Aldea Zama iwumphakathi okhulayo ozungezwe izakhiwo eziseduze nendawo yethu.
Futhi sikuphathele izinsizakalo zethu ze-concierge ngemali eyengeziwe, njenge:
Ukuhamba ngohambo olujikelezayo ukusuka eCancun International Airport ukuya endaweni yethu yokungcebeleka.
Umpheki Ozimele (Ibhulakufesi, Ibhulantshi, Isidlo sakusihlwa kanye nokunambitha kwe-Mezcal).
Uhambo lokuya nokubuya
Umshayeli oyimfihlo nokunye okwengeziwe!
Izinto ongazenza e- Tulum:
El Calavera Cenote
El Castillo, Kukulcan, Temple of the Frescoes kanye neThempeli likaNkulunkulu Owehlayo.
I-Great Cenote yaseTulum
Underwater Natural Museum Tulum Reefs
I-Tulum National Park
I-Coba Archaeological Zone
I-Tulum Archaeological Zone
Ngesikhathi sokuhlala kwakho siphakamise ukuthi amaqembu amakhulu, umndeni noma amaphathi e-bach athenge izinto zangasese ezengeziwe esitolo noma esitolo esikhulu esiseduze nendawo yethu. Singakuhlelela izinto zokugeza ezengeziwe namathawula ngemali eyengeziwe.
Siyakucela ngomusa ukuthi unikeze ukusetshenziswa okufanele kwamalineni, izingubo zokulala namathawula esikunikeza ukuhlala kwakho. Sicela ungazisebenzisi ukususa izimonyo, ukuhlanza izicathulo zakho, ukuhlanza ikhishi nanoma iyiphi indawo yefulethi. Sicela futhi ungazilahli kudoti. Uma singeke sikwazi ukususa amabala ngesevisi yokuwasha izingubo, uzokhokhiswa ngenkundla ye-Airbnb ukuze ubuyisele into, kanye nesevisi eyengeziwe yokuwasha.
"I-Space disinfected futhi yahlanzwa ngemikhiqizo eqinisekisiwe, izithako zayo ezisebenzayo zisebenza ngempumelelo ekuqedeni: Amagciwane, i-actinomycetes, isikhunta, amagciwane kanye nezinhlamvu".
I-Mexico okwamanje ayikudingi ukugonyelwa i-COVID, ukuhlolwa kwe-PCR noma ukuvalelwa yedwa okuyisibopho. Bonke abantu abavakashela e-Mexico kufanele bagcwalise leli fomu elilandelayo: https://www.vuelaseguro.com/login.
I-Aldea Zama iwumphakathi ovulekile umema izivakashi ukuthi zijabulele izinkonzo ezisezingeni eliphezulu nezinga eliyingqayizivele lokuphila endaweni engokwemvelo evikelekile nehlonishwayo.
Ngokwendawo, i-Aldea Zama itholakala maphakathi nesifunda saseQuintana Roo, endaweni yamasu: amahora amabili nesigamu ukusuka e-Chetumal, eCancun naseMerida, kanye nehora elilodwa kuphela ukusuka e-Playa del Carmen.
Itholakala futhi amakhilomitha amathathu kuphela ukusuka endaweni yokuvubukula yaseTulum namakhilomitha ayisikhombisa ukusuka eSian Kaan biosphere. Iphelezelwa izici zobuchwepheshe zokufudukela emadolobheni kanye nezinsizakalo ezisezingeni eliphezulu.
Ingqalasizinda ye-Tulum iyathuthuka nsuku zonke, isibonelo salokhu umgwaqo omkhulu wemizila emine i-Cancun-Tulum kanye nokwakhiwa kwesikhumulo sezindiza i-Riviera Maya. Lokhu kuyenza ibe indawo yokuqagela okuphezulu nokufinyeleleka okungenakuqhathaniswa.
Ibhili kagesi iphakeme kakhulu e-Tulum, ngakho-ke khumbula ukuvala i-A/C ngaphambi kokuthi usuke endaweni uyohlola! Cishe i-1h 30m ukusuka esikhumulweni sezindiza ukuya endaweni yethu.
Ngena ngaphambi kwesikhathi & Uphume Sekwephuzile, kuncike ekutholakaleni kwemali eyengeziwe engu-30 usd. Futhi singagcina umthwalo wakho, kuye ngokutholakala futhi, imali eyengeziwe engu-10 usd.
I-KiiN izoba ngumsingathi wakho endaweni; lapho ufika, uzobingelelwa yilungu labasebenzi bethu ukuze likuqondise. Ideski elingaphambili lizotholakala kuphela kusukela ngo-9am kuya ku-5pm nganoma imiphi imibuzo noma izidingo ongase ube nazo. Kunoma ikuphi sisazokwenza isiqiniseko sokuthi yonke into ihamba kahle ngesikhathi sokuvakasha kwakho, kusukela ekwamukelweni kuya kokuvalelisa.
Isakhiwo sisendaweni ethule futhi ephumule kakhulu ye-Tulum. Imizuzu engu-5 nje ukusuka edolobheni "pueblo" eningizimu ukusuka ogwini eduze neCarretera 307 (eyaziwa ngokuthi i-Avenida Tulum), imizuzu eyi-15 ukusuka emanxiweni aseMayan kanye nemizuzu emi-5 ukuya ogwini (i-Zona Hotelera), enwebeka phansi isuka emanxiweni. Nakuba kunamatekisi amaningi ahamba kuyo yonke imizila, indlela ejabulisayo nengabizi kakhulu yokuhambahamba e-Tulum ukuqasha amabhayisikili futhi uzinikeze amandla ngezinyawo zakho. Kunezindlela ezimbalwa ezinkulu zamabhayisikili e-Tulum ezenza ukuhamba ngebhayisikili kube yindlela ehamba phambili yokuhambahamba futhi omunye wemisebenzi edume kakhulu e-Tulum.
I-Tulum ingama-119km(74miles) ukusuka esikhumulweni sezindiza. Itekisi ihlale ikhona kodwa uma ufuna ukonga imali ethile ukuqasha imoto kunconywa ukuthi usuke esikhumulweni sezindiza uye eTulum ngokuthatha iCarretera Federal Cancún - Tulum Okunye okusho ukuthi ulayini webhasi osuka esikhumulweni sezindiza obizwa ngokuthi i-ADO, isuka njalo ngemizuzu engama-45 ngesikhathi. emini nakusihlwa futhi imisa e-Playa del Carmen, bese iya eTulum. Uma use-Tulum ukuhamba ngebhayisikili kuyindlela engcono kakhulu yokuhambahamba!
Awukwazi ukuya eTulum ngaphandle kokuhlola okungenani ama-cenotes ambalwa! Ama-cenotes empeleni ayimigede enamanzi ahlanzekile, ingxenye yohlelo lomfula ongaphansi komhlaba. Amanye anamawa ongakwazi ukugxumela kuwo, amanye mahle kakhulu ekutshuzeni i-snorkeling kanye ne-scuba diving, amanye asemigedeni evalekile, kanti amanye abukeka njengamachibi. Akumele udlule ohambweni oluqondisiwe, kodwa sincoma ukuthi ukwenze uma wenza i-snorkeling noma ukutshuza. Bahlinzeka ngamagiya e-snorkel futhi abaqondisi bawazi wonke ama-nooks nama-crannies apholile kanye nezindawo zemigede eyimfihlo umuntu obengeke aze angene kuzo uma uwedwa. Futhi banamathoshi angangeni manzi ukuze ubone ngempela ukuthi uhlelo lomhume lunwebeka futhi lujule kangakanani ngaphansi kwamanzi. Amahhotela amaningi agudle ugu lomgwaqo azokuhlelela uhambo lwama-cenotes oluzokulanda futhi likubeke khona kanye ehhotela noma mhlawumbe efulethini. Siyayithanda i-Casa Cenote - Lena i-cenote evulekile, futhi ifana nokubhukuda ehlathini nemihlume. Kukhona nalezo eziyinsimbi njengemigede. NjengoGran Cenote - Ivulekile ingxenye, ingxenye evalelwe nazo zonke lezi zimo zamatshe ezipholile eduze kwezindonga zomhume. Futhi izimfudu eziningi ezincane zibhukuda nxazonke. Hamba ekuseni kakhulu ukuze ugweme izixuku. Enye epholile i-Zacil-Ha - Le cenote encane inomugqa we-zip ongayigibela phezu kwayo bese ugxumela emanzini. Umsebenzi ojabulisayo kodwa ngenxa yokuthi mncane, ungena futhi uphume njengemizuzu eyi-15. Akuyona into okufanele uyibone, kodwa ukuma okujabulisayo uma ubona ama-cenotes amaningi. Uma kungeyona i-cenote diving, esikuthanda kakhulu ukudla kwasekuseni okuzolile kanye nekhofi ekhaya, i-hangout eklabhu yasebhishi ukuze uthole isidlo sasemini nasemini, bese sibuyela ekhaya sizophumula echibini lokubhukuda futhi siyogeza futhi siyodlela e-pueblo. Sithemba ukuthi uzowujabulela umlingo weTulum njengoba senza!
Lo mbungazi unokushiwo abanye okungu-522 kwezinye izindawo zokuhlala. Veza okunye okushiwo abanye
Ibungazwe ngu-KiiN Rentals
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-R7987.